गोरखाको एउटा गाउँ, जुन कोरोनाबाट अझै सुरक्षित छ – Tufan Media News
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १६:५२
गोरखाः कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देशभर फैलिएर जनजीवन नराम्रोसित प्रभावित भएको छ । जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । संक्रमणबाट बच्न केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले भौतिक दूरी र मास्क अनिवार्य गरिरहेका छन् ।
गोरखाको दुर्गम धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलाका अधिकांश बासिन्दा दुईसातादेखि रुघाखोकी र ज्वारोले ग्रस्त छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङसहित सातजना कोरोना संक्रमित छन् ।
अहिले त्यहाँ बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैको मुखमा मास्क छ । सोही बजारबाट बूढीगण्डकीको किनारै किनार दिनभरको पैदल यात्रापछि पुगिने अर्को दुर्गम चुमनुब्री गाउँपालिका भने कोरोना महामारीबाट सुरक्षित छ । यहाँ न कोही संक्रमित छन्, न कसैको मुखमा मास्क देखिन्छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिकामा पहिलो चरणको महामारीमा पनि कोही पनि संक्रमित बनेनन् । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी चलिरहँदा चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातवटै वडा अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिका प्रवेश गर्ने जम्मा तीनवटा नाका छन् । सम्भावित संक्रमितले प्रवेश नपाउन् भनेर गाउँपालिकाले तीनैवटा नाकामा कडाइ गरेको छ ।
नेपालीहरु प्रवेश गर्ने एक मात्र प्रवेशद्वार जगत हो, त्यहाँ हेल्थडेस्क राखिएको छ । त्यहाँ खटिएका दुई जना स्वास्थ्यकर्मीले ज्वारो तथा यात्रुको कन्ट्याक हिस्ट्री सोधपुछ गरेपछि मात्र बाटो खाली गरिदिन्छन् ।
अरु दुई नाका तिब्बती हुन्, जुन गत वर्षदेखि नै ठप्प छ । जङ्गली पशुपंक्षीबाहेक अरु केही प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । चुमनुब्री गाउँपालिकामा सातवटा वडा छन् ।
वडा नं. १ को २२५ घरधुरीका ८७७ जना, वडा नं. २ का ३३४ घरधुरीका ११७७ जना, वडा नं. ३ का ७२२ घरधुरीका ३०७७ जना, वडा नं. ४ का २०९ घरधुरीका एक हजार आठजना, वडा नं. ५ का दुईसय ४८ घरधुरीका सातसय ५६ जना, वडा नं. ६ का दुईसय ७० घरधुरीका नौसय २५ जना र वडा नं. ७ का दुईसय ६५ घरधुरीका एघारसय ९६ जना अहिलेसम्म सुरक्षित रहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मनास्लु आरोहण, मनास्लु तथा चुमभ्याली ट्रेकिङले प्रसिद्ध चुमनुब्रीमा यतिबेला पर्यटन क्षेत्र सुनसान छ । पर्यटन व्यवसाय(होटल) ठप्प छ भने किसानहरु खेती किसानीमा व्यस्त छन् । कोरोना महामारीको बारेमा खासै चर्चा नहुने ल्हो गाउँका होटल व्यवसायी छिरिङ लामा बताउँछन् । ‘कोरोनाका दृष्टिले चुमनुब्री अहिलेसम्म सुरक्षित छ’, उनी भन्छन्, ‘बाहिर देशबाट, बाहिर जिल्लाबाट आउनेहरु खासै छैनन् । त्यसैले यहाँ कोरोनाको कसैलाई डरत्रास छैन ।’
गाउँलेहरु कोही सडक निर्माण गर्दैछन्, कोही घर बनाउने काममा तथा कोही खेती किसानीमा व्यस्त रहेका वडा नं. ४ का अध्यक्ष पेमाडुण्डुप लामा बताउँछन् । ‘सबैलाई आ–आफ्नै कामको ध्याउन्न छ । सबै काममै व्यस्त छन्’, उनले भने, ‘कोरोनाको बारेमा गफ गरेर बस्ने फुर्सदै छैन । मतलब पनि कसैले गर्दैनन् ।’(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ)
यी हुन् अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट
दुई प्रेमिकासँग एउटै मण्डपमा
उपत्यकामा फेरी लागु हुने
नेपाल हवाई यात्राः कुन-कुन